Uyivavanya njani iGuitar Amp ngaphambi kokuba uthenge
Kubalulekile ukuba wazi ukuba ungayivavanya njani i-amplifier yombane ngaphambi kokuba uyithenge ukuqinisekisa ukuba iyahlangabezana neemfuno zakho. Xa ukhetha i-amp amp, kuya kufuneka uthathele ingqalelo izinto ezininzi, njengetoni, ubugqwetha, amanqaku kunye nohlahlo-lwabiwo mali. Ngaphandle kokuyivavanya, awunakuvavanya ngokupheleleyo isandi esidalwayo. Ngaphambi kokuba uyithenge, kuya kufuneka ungene kwi-amp amp kwaye uzame.
Kuya kufuneka wazise umthengisi kwivenkile yakho yendawo oceba ukuzama kuyo amp ngaphambili uyayithenga. Unokude enze amalungiselelo engxolo ezayo. Iivenkile ezininzi zomculo zinegumbi elahlukileyo lokwenza ingxolo ephezulu kangaka. Uya kudinga ukukhangela isandi se-amp kumanqanaba eevolumu ezahlukeneyo, kodwa zama ukugcina ixesha xa usenza i-decibel ephezulu ifutshane.
1Jonga ukuba i-amp amp iplagiwe eludongeni okanye kwindawo yomtya kwaye indawo ekuphuma kuyo iyaphila.
Imicimbi yokuphuma ngamanye amaxesha inokuba ngumqobo kwiindawo apho iindawo ezilawulwa khona zilawulwa ngokutshintsha.
MbiniFumana iiqhosha zevolumu kwaye uzijike ziye ezantsi - zihlala zihamba ngokuchasene newotshi ngokupheleleyo.
Khumbula ukuba ezinye ii-amps zinamaqhina omthamo angaphezu kwesinye, kwaye zinokuba namanye amaqhina ngaphandle. Ukuguqula ivolumu yonke indlela ezantsi kuqinisekisa ukuba awuvelisi nayiphi na ingxolo engxamisekileyo, enokuthi, ubuncinci, yoyikise kwaye iphazamise abantu abakungqongileyo kwaye, okona kubi, ukuvuthela ifuse okanye ukonakalisa isithethi.
Isiginci amp ayinakwenza lukhulu ngaphandle kwesiginci sombane esixhonywe kuyo.
4Flip kwiswitshi samandla.
Amps amaninzi anokukhanya okubonisa ukuba i-amp ivuliwe.
5Jika izilawuli zethoni-ezantsi, eziphakathi, kunye nokuhamba-ukuya kwinqanaba lazo eliphakathi.
UMidway uhlala malunga ne-12: 00 ukuba unomfanekiso wokudayala njengewotshi. Oku kuqinisekisa ukuba ufumana isandi esingathathi hlangothi, esingabhalwanga kwi-amp.
6Dlala ujonge ukumamela.
Dlala izikhotha ezimbalwa kwiindawo ezahlukeneyo zekatala, nakwimigangatho eyahlukeneyo kunye namanqanaba eethoni. Mamela ukuphazamiseka okungafunekiyo (okanye okufunwayo?)
Uyenza njani i-spice drug ekhaya
yintoni i-codea ye-guaifenesin
ipilisi yokuchonga iwizard kwiziyobisi com
Iziphumo ebezingalindelekanga zexesha elide ze-claritin
I-keratitis ihlala ibangelwa